Ukuphupha umgcini nyosi Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Abafuyi beenyosi ngabalimi abanoxanduva lokugcina kunye nokuzala kwakhona iinyosi zobusi. Oku kukhatshwa yimveliso yobusi kwelinye icala, kwaye abafuyi beenyosi bangenza nezinye iimveliso ezinxulumene nenyosi kwelinye icala. Imizekelo yoku ngamakhandlela e-beeswax okanye i-cosmetic bex.
Awudingi naluphi na uqeqesho olukhethekileyo ukuze ube ngumgcini nyosi. Nangona kunjalo, ngakumbi eJamani, oko kubizwa ngokuba 'sisiseko sokugcina iinyosi' kuyacetyiswa, apho amaqela anomdla anokufumana khona izakhono ezisisiseko zokufuya iinyosi.
Ngaphandle komgcini nyosi, kukho uZeidler. Akaziphakamisi iinyosi, kodwa uqokelela ubusi kwiinyosi zasendle, ikakhulu ehlathini.
1 Uphawu lwephupha «umgcini nyosi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «umgcini nyosi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «umgcini nyosi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «umgcini nyosi» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokokuhlalutya ngokubanzi kwamaphupha, umgcini nyosi angasebenzisa i umdla umsebenzi ukwazisa. Umphuphi uya kuthi kungekudala afumane umsebenzi onokuba nefuthe kakhulu kubomi bakhe kwaye onokumnika umkhombandlela omtsha.
Ukuba umzali wenyosi unakekela umhlambi weenyosi zakhe ephupheni, oku kungaphumelela kwaye kuvuse ubomi. mpu melelo ukwazisa. Umntu ochaphazelekayo unexesha elihle phambi kwakhe ukuba uyaqhubeka nokufezekisa imisebenzi yakhe ngokuzimisela nangokunyamezela. Ukuba umgcini nyosi usebenzisa umsi ngelixa elele ngelixa esebenza neenyosi zakhe, umntu uhlala ejongene nokungazithembi kwakhe kumcimbi othile.
Ukuba umgcini nyosi uvuna ubusi ephupheni, apho athe wabususa kumanqatha, oku kujongwa ngokubanzi kutoliko jikelele lwephupha njenge uphawu oluqinisekileyo Ndiyaqonda. Omnye unethamsanqa el mundo zokwenza iwotshi, ngakumbi kwimicimbi yezorhwebo. Ukuba umgcini nyosi ujonga iinyosi zakhe ngelixa aleleyo, oku kungabhekisa kumnqweno wakhe wokuba noluntu nabanye abantu.
Nabani na obona impahla ekhuselayo yomgcini nyosi ephupheni lakhe, umzekelo iovaroli, iminqwazi okanye iminqwazi enethumbu kunye neiglavu, kwelinye icala kufuneka azi ukuba ufuna ukuzikhusela kwizinto ezithile okanye ebantwini ngokwenyani. Kwelinye icala, oku kunokusetyenziswa njengomfuziselo ozayo Imizamo, enokuthi ibe yingozi.
Ngapha koko, le mpahla yokugcina iinyosi inokuqondwa njengomfanekiso wephupha ngengqondo yesikrweqe. Ke iphupha elinje lihlala libonisa inqanaba elithile Ukungenelela ngaphandle, ukuba iphupha libonisa kwizigqibo ezilandelayo.
Uphawu lwephupha «umgcini nyosi» - ukutolikwa kwengqondo
Kubonwa ngokwembono yengqondo, umfanekiso ofana nephupha womgcini nyosi xa ulele ungabonwa njengombonakaliso wobuhlobo kunye ukusebenzisana Makuqwalaselwe. Iphupha elinje kufanele ukuba lenze umntu oleleyo ukuba azi ukuba unolwalamano oluhle nendalo yakhe, ekwabonakaliswa yimvisiswano kunye nokungabikho koxinzelelo.
Ukuziphatha ngononophelo kunye nokuqonda komgcini nyosi ekufikeleleni kubusi ngexesha lokulala kunokuba luncedo kwihlabathi elivukayo. inyathelo elilumkileyo umnxeba. Umntu kufuneka aqonde umgca ococekileyo phakathi komngcipheko kunye nomvuzo ekulindeleke ukuba ekuwo ngoku.
Ukuba umgcini nyosi uhlaselwa ziinyosi ephupheni, umntu obandakanyekayo uhlala enezinkulu. Utshintsho ngenxa ye. Ngokuqinisekileyo ezi ziya kuyitshintsha kakhulu imeko yakho yangoku yobomi. Ukuba umgcini nyosi ufumene iinyosi ezimbalwa kwinkqubo, kuya kuba bubulumko ukujongana nokungabikho zingqondweni. Kungenxa yokuba apha imixholo ethile ibonakala ngathi ingena ezingqondweni, efuna ingqalelo yomntu uphuphayo.
Uphawu lwephupha «umgcini nyosi» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwephupha lokomoya kulibona kumfuziselo "womfuyi wezinyosi" obhekisa kwi Amandlaukuba umphuphi kufuneka abuyisele amandla akhe kwindawo yokomoya.